छानीछानी खानुहोस् जागीर : वित्तीय क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर – Banking Khabar
छानीछानी खानुहोस् जागीर : वित्तीय क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर
बैंकिङ खबर । वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारीको प्रशस्त अवसर खुलेको छ । बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त, फाइनान्स र सहकारी गरी ८ वटा संस्थाले भ्याकेन्सी खुलाएका छन् । सबैमा गरेर दुई सयभन्दा बढी रोजगारीको अवसर छ ।
नविल बैंकले ५० जना ट्रेनी एसिस्टेन्ट र १० जना मेनेजमेन्ट ट्रेनी मागेको छ । अनुभव नभएका कर्मचारीको माग भएकाले सुरुमा प्रवेश गरेर करिअरको सुरुवात गर्न चाहनेहरुका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको छ । एसिस्टेन्टका लागि स्नातक र मेनेजमेन्टका लागि स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ । आवेदन दिने म्याद १७ सेप्टेम्बरसम्म छ ।
सानिमा बैंकले डिपोजिट मेनेजमेन्टका लागि एसिस्टेन्टदेखि अफिसर लेभलका रिलेसनसिप अफिसर वा मेनेजर मागेको छ । एसिस्टेन्ट बन्न स्नातक र अफिसर बन्न स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ र २।३ वर्षको अनुभव पनि बैंकले मागेको छ । आवेदन दिने म्याद २५ सेप्टेम्बरसम्म छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले गण्डकी, नारायणघाट र बुटवल क्षेत्रका लागि शाखा प्रबन्धक, लिेसनसिप मेनेजर, सर्भिस मेनेजर तथा अपरेसन इन्चार्जका साथमा केन्द्रीय कार्यालयको कार्ड डिपार्टका लागि एक जना सुपरभाइजर पनि मागेको छ । शाखा प्रबन्धकका लागि तीन र अन्यका लागि दुई वर्षको अनुभव मागिएको छ । आवेदन दिने म्याद २५ सेप्टेम्बरसम्म छ ।
देवः विकास बैंकले कर्पोरेट अफिसको माइक्रोक्रेडिट डिपार्ट, काठमाडौँ, धनगढी र नारायणगढको क्षेत्रीय कार्यालय, काठमाडौँ, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, सुनसरी मोरङ, झापा, रुपन्देही, इलाम, धादिङ, काभ्रे, बर्दिया, सिन्धुपाल्चोक, नवलपूर, बाँके र पर्सा शाखाका लागि अफिसर लेभलका कर्मचारी मागेको छ । त्यस्तै, धनगढी क्षेत्रीय कार्यालय र विभिन्न शाखाका लागि सुपरभाइजर, एसिस्टेन्ट र जुनियर एसिटेन्ट मागिएका छ । आवेदन दिने म्याद २५ सेप्टेम्बरसम्म छ ।
पोखरा फाइनान्सले केन्द्रीय कार्यालयको क्रेडिट रिस्ट डिपार्ट, अपरेसन डिपार्ट र पोखराका लागि १।१ जना सिनियर अफिसर मागेको छ । मेनेजमेन्ट वा अर्थशास्त्रमा स्नातक उतीर्ण गरी सात वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछ । पोखराकै लागि २।२ जना अफिसर र सुपरभाइजर पनि मागिएको छ । आवेदन दिने म्याद असोज ६ गतेसम्म छ ।
सबैको लघुवित्तले एक जना प्रबन्धक, एक जना सुचना प्रविधि सहायक र केही संख्यामा शाखा प्रमुख, सहायक र कनिष्ठ सहायक मागेको छ । आवेदन दिने म्याद भदौ ३१ गतेसम्म छ ।
मेरो माइक्रोफाइनान्सले अधिकृत र सहायक लेभलका विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको छ । आवेदन दिने म्याद असोज ७ गतेसम्म छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ८९ जना कर्मचारी मागेको छ । एप्लाई गर्ने म्याद असोज ८ गतेसम्म रहेको छ ।
बैंकिङ कर्मचारीका ‘छ’ खराव विशेषताहरु
व्यबसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? कसरी लिने बैंकिङ कर्जा ? (सहयोगि रिपोर्ट)
सहकारीका समस्या : ऐन कार्यान्वयनको चुनौतीदेखि नियमन निकायको अन्यौलतासम्म
दशैं, नयाँ नोट, नोटको आयु अनी बैंकरको तनाब
दशैँका नयाँ नोट : अधिकतममा १८ हजारसम्म साट्न पाइने
बैंकमा पैसा अभाव
निक्षेप घट्दा बैंकमा कर्जायोग्य रकम अभाव
विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक अंशुला कान्तको जीवनी
नविल बैंकको संचालकमा उदयकृष्ण उपाध्याय
३२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाबाट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले सुरु गर्यो लगानी
Email : [email protected] (news), [email protected] (advertize)